ပူလွန်းတဲ့ နေရောင်အောက်မှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရင်ထဲကဆန္ဒကို ထုတ်ဖေါ်ပြသလိုက်တဲ့ မေပန်းချီနဲ့ ခရစ္စတီးနား – Online News Post
ပူလွန်းတဲ့ နေရောင်အောက်မှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရင်ထဲကဆန္ဒကို ထုတ်ဖေါ်ပြသလိုက်တဲ့ မေပန်းချီနဲ့ ခရစ္စတီးနား
ခုဆို ရင် အနုပညာ နယ်ပယ် အသီးသီးမှာ အောင်မြင်မှု တွေအခိုင် အမာနဲ့ ရပ်တည် နေကြတဲ့ အနုပညာရှင် တွေဟာ လတ်တ လောဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ အခြေအနေ တွေနဲ့ပတ် သက်ပြီး ပြည်သူ တွေနဲ့အတူ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ အားမ လျော့ဘဲ ရပ်တည် ကာ တစ်ထောင့် တစ်နေရာ ကနေ ပါဝင် လျက် ရှိနေတာ ကို အားလုံး မြင်တွေ့ ရမှာပါနော် … .
ပြည်သူလူထု တွေအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အတူ ထပ်တူ ကြပြီး သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေ အတွက် တတ်နိုင် တဲ့ဘက် ကနေ ရဲရဲ ဝင့်ဝင့် ပါဝင် အားဖြည့်နေ ကြတဲ့ အနုပညာရှင် တွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေ ကလည်းလေးစား ချစ်ခင်နေ ကြတာ လည်းဖြစ် ပါ တယ် … .
အခု လည်း မေပန်းချီနဲ့ ခရစ္စတီးနား တို့နှစ်ယောက် ဟာ ဖမ်းဆီးခံ ခေါင်းဆောင် များပြန် လည်လွတ်မြောက်ရေး အတွက်မြန်မာ ပလာဇာရှေ့ မှာ ဆိုင်းဘုတ် ကိုင်ဆောင် ရင်း ငြိမ်းချမ်း စွာ ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ ကြတာဖြစ် ပါတယ် ။ ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး ဂုဏ်ယူ လေးစားမိ တာကြောင့် ပြန်လည် ဝေမျှပေး လိုက်ပါတယ် နော် … .
ခုဆို ရင္ အႏုပညာ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြအခိုင္ အမာနဲ႔ ရပ္တည္ ေနၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ ေတြဟာ လတ္တ ေလာျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ အေျခအေန ေတြနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ျပည္သူ ေတြနဲ႔အတူ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမၽွ အားမ ေလ်ာ့ဘဲ ရပ္တည္ ကာ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာ ကေန ပါဝင္ လ်က္ ရွိေနတာ ကို အားလုံး ျမင္ေတြ႕ ရမွာပါေနာ္ … .
ျပည္သူလူထု ေတြအားလုံးရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ အတူ ထပ္တူ ၾကၿပီး သူတို႔ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ေတြ အတြက္ တတ္နိုင္ တဲ့ဘက္ ကေန ရဲရဲ ဝင့္ဝင့္ ပါဝင္ အားျဖည့္ေန ၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ ေတြကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြ ကလည္းေလးစား ခ်စ္ခင္ေန ၾကတာ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္ … .
အခု လည္း ေမပန္းခ်ီနဲ႔ ခရစၥတီးနား တို႔ႏွစ္ေယာက္ ဟာ ဖမ္းဆီးခံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျပန္ လည္လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ျမန္မာ ပလာဇာေရွ႕ မွာ ဆိုင္းဘုတ္ ကိုင္ေဆာင္ ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခဲ့ ၾကတာျဖစ္ ပါတယ္ ။ ပုံေလးေတြ ၾကည့္ၿပီး ဂုဏ္ယူ ေလးစားမိ တာေၾကာင့္ ျပန္လည္ ေဝမၽွေပး လိုက္ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးရှေ့မှာ လူထုနဲ့အတူ တက်တက်ကြွကြွပါဝင် ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်
Next post ရင်ခုန်စရာ အတွင်းသားအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းဆုဦးရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး